Ahịa na Ahịa: Egwuregwu mbụ nke ocheeze | Martech Zone
Nke a bụ nnukwu infographic site na ndị mgbaghara na otu nzukọ ebe ahịa na ire ahịa na-agbasi ike iji kwado onwe ha. Dị ka a ọkachamara n'ahịa, anyị mgba na ahịa-chụpụrụ òtù dị ka nke ọma. Otu isi okwu bụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa na-ere ahịa na-etinyekarị otu atụmanya ha nwere maka ndị ahịa ha na otu ndị ahịa.
Anyị na-goro site ahịa-chụpụrụ òtù n'ihi na ha na-aghọta na ha ika adịghị wuru mmata, ikike na ntụkwasị obi online na na ha ahịa otu na-ịlụ bibie site asọmpi na-eme. Mana mgbe emesịrị itinye ego na iwulite mmata ahụ, ikike, na ntụkwasị obi - onye isi ahịa ahụ na-amalite ibelata ntakịrị na ogo ndu, ibu ụzọ, ọsọ nke nso, na uru nke njikọ ahụ. Ọ bụ atụmanya dị ịtụnanya itinye na obere oge. Anyị chọrọ ịlele ọkụ mgbe ọ bịara ahịa.
Anyị chọrọ iji hụ na, na nnukwu ahịa usoro, na anyị na-eto eto mmata, iwu ikike, na-enweta ntụkwasị obi. Site na nkwukọrịta n'etiti ụlọ ọrụ na-ere ahịa, anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-ewepụta achịcha kwesịrị ekwesị nke ga-enyere ndị ahịa ahụ aka ịkwụsị ọrịre ahụ. Ka oge na-aga, anyị chọrọ ilele ihu ọma na-eduga, na-ebute mmụba nke ukwuu, ụgwọ ọ bụla na-eduga, na-eme ka ọsọ ọsọ na uru nke njikọ ahụ pụta. Anyị kwesịrị ịdị na-ahụ nke a ogologo oge… ọnwa na afọ, ọ bụghị ozugbo.
Site n’inwe ebum n’uche dị iche iche, nkwali, na ngwa ọrụ, ị kwado ngalaba ụlọ ọrụ ịre ahịa na azụmaahịa gị nwere ike ịbụ ihe ịma aka kwa ụbọchị. Otu ọ bụla na-ekwu ihe niile ha kwuru n’ebe a na-azụ ahịa, o nwere ike isiri gị ike ịhụ ebe ha ga-ejikọ ọnụ. Agbanyeghị, mgbe ahịa na ire ahịa na-arụkọ ọrụ iji mepụta ndu, zụlite mmekọrịta, yana mmekọrịta dị nso, ụlọ ọrụ nwere ike ime nke ọma. Matt Wesson, gbaghara.
Onwere bụ trickier. Ekwetaghị m na ọ bụla ire ga-nanị ekewet ma ma ọ bụ. Gị ahịa onye kwesịrị inwe ike ịga n'ihu ma na-ekele ahịa otu maka agwa na ụgbọala na-eduga kwupụta nso. Ndị ahịa gị kwesịrị inwe ike ịnye nyocha gbasara etu mbọ ha si enyere ndị na-ere ahịa ahịa aka. Ọ bụ ya mere m ji enwe ekele maka njedebe nke akwụkwọ ozi a - na-atụ aka otú ahịa akpaaka - na ndu akara / akara aka, ndu nurturing na akuko ga - enyere ndi ahia aka ma duzie ndi ahia ka ha kwalite usoro inweta ihe.
Akụkụ akụkụ: Dịka onye agha ahịa, aga m etinye CMS m na ibe ibe ya na ụzọ oku na-aga n'ihu Twitter na ọbụlagodi Adwords. Ọdịnaya (nke nwere akara guzosiri ike) ga-abụrịrị ntọala nke usoro ahịa ọ bụla inbound.
Tags: egwuregwu nke n'ocheezendu ndundu nurturingndu akukondu akaraebumnuche ahiangwa ahiamgbagharansogbu na ahiansogbu na ahịaire ahia na ire ahiankwali ahịaahia ahiaire ahia na ire ahia